Amazon Associates Central Sucks yakaipa seKomisheni | Martech Zone
John Chow munguva pfupi yapfuura akanyora nei asina kushandisa Amazon mukushambadzira kwakabatana, chikonzero chekutanga kuve makomisheni chakaderera. Ndiri kuda kujoina John nechimwe chikonzero.
Amazon inoita kuti zvisave nyore kushandisa yavo Associates package. Kupenga chaiko nguva dzese dzandinopinda imomo kuti ndiwane kubatana, handikwanise kuzviwana. Heino muenzaniso. Ini ndichangobva kutenga Herd: Maitiro Ekuchinja Massa Maitiro nekusunga Hwedu Hwechokwadi hunhu (na Maka Earl) mushure mekuverenga nezvazvo pablog raHugh MacLeod - gapingvoid.
Ini ndinopinda kuAmazon.com Associates Central.
ndinoenda ku Vaka Zvinongedzo.
Ini ndinosarudza Product Links sezvo ini ndichiziva zita rechigadzirwa kare.
Ini ndinopinda chitofu neboka rezvigadzirwa se Books.
Ini ndinodzoka gumi zvabuda. Pane gumi, bhuku raMark ndiro chete rinonyatsodaidzwa kuti “Herd” asi iri nhamba 10 pachinyorwa. Nhamba 10 ndiyo Nzou Yakavanzika Sense. Ndatenda Amazon!
Iye zvino ndinofanira kubaya "Tora HTML" iyo inondiunza kune inotyisa peji kuti ndiite yangu link:
Kana ini ndikasarudza imwe Yakabatana-ID izvozvi, iro peji rinobvisa zvese zvandinenge ndasarudza uye ndinofanira kutanga patsva zvakare. Kururamisa.
Ini ndinoteedzera uye ndinamate kodhi yacho mu WordPress ndokutumira.
Mufananidzo hauratidzike. Ini ndinoona kuti Amazon haisi kusanganisira imwe hama nzira kune chifananidzo kuburikidza nedomain yavo. Vanonditumira email uye vondiudza izvo nekuti ndinofanirwa kunge ndichigamuchira iwo mufananidzo pane yangu server. Uri kutamba neni here? Ko Amazon haisi iyo imba ye S3?
Kwidziridzo: Kana iwe uchiri kunetseka nekuvaka zvako zvinongedzo, ini ndinokurudzira zvikuru kushandisa Sangano reAmazon's SiteStripe!
Mamwe Mazano Ekuvandudza Chigadzirwa cheAmazon:
Isa fomu "Get Links" yeimwe mhando pane iyo Login Landing peji.
Rega ndivake template yangu yandaida uye ndichengete muaccount yangu (ini ndinongoshandisa 1 dhizaini).
Kana ndatsvaga chinhu, pindura netemplate HTML yandakadoma padanho rechipiri)
Usati iri HTML kunze kwekunge iri iyo chaiyo HTML. Iyo HTML yaunopa haina kodzero URI kumufananidzo!
Ndokumbira utore iwo mapikisheni ekuteedzera emifananidzo kubva kune ako akareruka mavara ma link Geesh. Iyo inobvisa chimiro changu. Tarisa pazasi apo ini ndine Amazon chinongedzo ku "Ajax". Cherekedza mukaha uri shure kwawo?
Izvi zvaizotora maminetsi angu makumi maviri kuti ndiwane iyo darn kodhi uye ndoitora pasi pasi peminiti. Mukutendeseka kose, handifunge kuti dhizaini yeiyi yakabatana sevhisi yachinja kubva payakatangwa. Iyo yekubatanidza anovaka kunyange achiri kutumira post backs (Amazon - tarisa kumusoro Ajax mukusarudza kwako bhuku). Zvaive zvinotyisa pazuva 1 uye zvinotyisa izvozvi. Saka… kwete chete iro rakaderera Commission, iyo interface inoyamwa.
PS: Chinongedzo kuna Herd chave kuiswa pane yangu Kuverenga Peji. Ndiri kutarisira kune ino!
Tags: Amazonamazon yakabatana zvinongedzoamazon shamwariamazon kushamwaridzana sitestripesitestipe
iPhone paFlickr: Anopfuura gumi nemashanu emifananidzo uye achikwira
Unogona kuyedza WP plugin yeAmazon…
Ndiyo imwe yemapulagini akanakisa andisati ndamboona. Nehurombo, ini ndinoshandisa iyo yakajeka mupepeti sezvo ini ndichiwedzera yakawanda zvinyorwa uye multimedia mune zvandatumira uye iyo plugin haina kuenderana. Yange iri beta kwemwedzi yakawanda ikozvino - ndinotarisira kuti anogona kuiwana ichishanda nechero mupepeti aripo!
Zvakare, chero vanyori vepulagi vanofanirwa kunyatso tarisa - ndiyo imwe heki ye plugin!
Zvakare, Amazon inofanirwa kubata manalang uye kumushandira kuti agadzirise peji ravo reShamwari !!! 🙂
Jul 3, 2007 pa 10: 36 AM
Zvinenge zviri nyore kwazvo kuti iwe ushandise iyi plugin, kunyangwe pane default WP yekuisa. Neniwo ndinoshandisa iyo yakajeka mupepeti, asi nekumisikidza WP zvakare ine yakafuma zvinyorwa mhariri yakaiswa. Ingoshandisa zvakapfuma zvinyorwa zvemuchina nekumisikidza, uye shandura iyo tabu yekodhi yekutarisa kuti uite chero basa raunoda. Wobva wadzosera kumashure kune akapfuma mameseji ekuona kudonha uye kudhonza maamazon zvinhu mune yako posvo. Ingori bhatani rekuwedzera, uye ipapo unogona kuramba uchishandisa mupepeti waunofarira kune rakawanda rebasa rako!
Jul 4, 2007 pa 9: 53 AM
Dambudziko nemupfumi chinyorwa mupepeti ndechekuti inobvisa zvachose chero akaiswa mamaki tag (semuenzaniso kuisa vhidhiyo yeYouTube).
Jul 1, 2007 pa 4: 09 AM
Mari yavo yakakwira ingangoita 70% YTD. Vanofanira kunge vachiita chimwe chinhu nemazvo!
Ini ndinoedza kudzivirira izvo zvigadzirwa zvinongedzo ndichifarira kwakadzika kubatanidza kana kubatanidza kune iyo toni senge iwe zvauri kuita pane yako kuverenga peji.
Jul 1, 2007 pa 10: 57 AM
Ndakanga ndakaomarara pavari, handizvo here? Ndine ruremekedzo rukuru kuAmazon, Robert. Vashandura maindasitiri ekutengesa uye ekuparadzira. Ndiri kungovhiringidzika kuti kambani yakafambira mberi ingangobhadhara kudiki kutarisisa yakawanda nzvimbo yewebhu.
Kana ivo vakagona kufambisira mberi maAPIs avo sezvakaita Google, ndinonyatsofunga kuti vanogona kuve nemaviri-manhamba ekukura mukutengesa kwewebhu. Mamwe makambani ari kufamba nenzira iyi uye Amazon inogona kupfuurwa kana ikasatora mukana wekudyara!
Jul 1, 2007 pa 9: 26 AM
Ndakaedza Amazon kwechinguva kudzoka ... ini ndinongo chengeta diki rekutsvaga pane iyo Chirungu mainpage Yangu blog ... ini handina moyo murefu wekuvaka zvinongedzo zvangu manually :)
Kune rimwe divi, ini ndaona Roger Johansson kubva 456BereaStreet kubudirira chaizvo neAmazon? (iye akanaka kwazvo CSS mugadziri) 🙂
Jul 3, 2007 pa 7: 18 AM
Ini ndaive nenzira imwechete newe, Doug.
Mwedzi yakati wandei yapfuura, ini ndakaedza kuita mari imwe yeBloggspots yangu neiyi Batanidza ndikapinda mudambudziko rakafanana. Mufananidzo wacho hauna kuuya! Uye hongu, ivo vari kuseka iwe. 😈
Jul 9, 2007 pa 8: 16 AM
Izano rakanaka. Ndatenda!
Whoops - ini ndaigara ndichigadzirisa nzira dzemifananidzo ndichifunga kuti yaive bhagi. Zvakadaro, handizvishandise izvozvi, saka ndinofungidzira kuti havagone kushevedzera.
Feb 29, 2008 at 12:31 PM
Ndine chikonzero chakasiyana zvachose chekuziva kuti Amazon Associates SUCKS. Basa risingabatsiri risina hanya nevabudisi vavo. Ini ndakatumira nezvazvo mublog rangu .. Paridza izwi!
Nov 9, 2008 pa2: 43AM
Amazon Associates ine yepasirese isingabatsiri vatengi. Ivo vanopindura mukati memazuva matatu asi mhinduro dzavo dziri INANE. Hazvina musoro. Zvakafanana nekuti havasi kana kunetsekana nekuverenga kunetseka kwako, ivo vanongoputira zvisina basa, zvisina musoro, ruzivo rwakakosha. Imwe nguva vakandikumbira kuti ndivatumire "ruzivo rwavakakumbira" asi havana kana kana chavakambokumbira kana chinhu.
Ini yeimwe, senge mari inowanikwa kubva kuAmazon Associates asi ini handina kukwanisa kubvumirana zvakanyanya nezve chivakwa chekuvaka. Ini ndinonetsekana kwazvo ndichivhiringidzika kuti mangani hoops andinofanira kusvetuka kuburikidza kuti ndiwane chigadzirwa chinongedzo.
Kana iwe uchida kushandisa imwe yewavo majeti, imhepo. Asi kana iwe uchida chinongedzo chechigadzirwa chega, marwadzo ehumambo.
Gumiguru 21, 2008 pa 3:18 AM
Iwe urikushaya poindi yakakura nei amazon isiri kuita zvakanaka kune vanhu vazhinji.
Amazon inokupa iwe chete hwindo remaawa makumi maviri nemaviri kune yako yekurevera kutenga chigadzirwa. mushure meizvozvo hapana chaunowana.
80% yevanhu havangatenge mukati memaawa makumi maviri nemana.
Ndiri kuyedza mamwe emabhuku akanakisa paamazon uye ndiri kuwana yakawanda yekudzvanya kuburikidza.
Ndine chokwadiwo kuti vanhu vazhinji vachatenga chimwe chinhu kubva kwavari asi kwete mukati maawa makumi maviri nemana.
Kuti yangu 6% yaenda uye amazon anowana mutengi mutsva
Yeuka, chikamu chakaomesesa cheamazon kuwana mutsva kubhadhara mutengi. Kana ikangoita izvo, inozoita zvimwe zvakawanda kuburikidza nehupenyu hwemutengi.
Munyika yakanaka, ini ndaizowana mari yekomisheni kuburikidza nehupenyu hwese hwemutengi wandinoreva.
Nehurombo, ndiri kungotumira amazon emahara traffic, uye ndisingaite chinhu kwandiri.
Amzagong yaimbopa hwindo risingagumi, asi semakambani ese ane marwadzo ari kukura, vava mbongoro KUKURU….
Zvita 14, 2008 na8: 25 PM
Ini ndinofunga maAmazon Associates achiri akanakisa. Chokwadi mamwe maturusi ari mashoma quirky, asi kana iwe uri mugadziri, ivo vanokupa iwe zvese zvishandiso zvaunoda kuti utengese.
Ihafu-mbongoro nzira yeAmerica here?
Amazon.com Associates webhusaiti iri JOKE… Ini handisi kukwanisa kugadzirisa kero yangu pasi peanobhadhara-info.html peji. Haisi dambudziko nekombuta yangu kana nemakuki kana ne firewall sekutsigirwa kweAmazon neAmazon. Vakandiudza kuti hapana chavanogona kuita kundibatsira kugadzirisa kubva kukero yeNorth Carolina kuenda kune imwe nyika. Saka, ndinofungidzira ndichave ndichivhara maakaunzi eAmazon Associate uye rangu rese basa rapfuura ndiri kuenda kuatrash bin neAmazon haisi kuzowana husiku hwekurara pamusoro pekundirasa semubatsiri wavo CHETE nekuti webhusaiti yavo irikuseka uye rutsigiro rwavo runogona ' t kunyange kugadzirisa kero yangu! Handichazombotengazve chero chinhu kubva kuAmazon.com!
Google Adsense inobhadhara webhusaiti yangu zviuru zveUS $ nepo Amazon jusyt achindibhadhara $ 7 - $ 12 pamwedzi. Handifungi kuti zvakanaka, ndichave ndichibvisa amazon zvinongedzo kubva kune yangu saiti munguva pfupi iri kutevera.
Nenzira, ini ndangoona kuti ndanga ndichipa maAmazon traffic kubva kune yangu huru webhusaiti kweanenge 6-8 makore ikozvino uye ini handina kuziva kuti ID yanga yatokanzurwa - Amazon haina kunetsa kundiyeuchidza kuti ndaipfura ndisina mabara… ivo chinyararire uye vachifara vakatora traffic yese nevatengi vandakavatumira uye havana kana nemutsa kundizivisa kuti ndinogona kuwana mari nazvo…
Tsigiro yeAmazon yakandipa inotevera email kero yeAmazon Associates Chirongwa rutsigiro: assoc-1@amazon.com Mhedzisiro yacho: "Kero yakarambwa. Chikonzero: 550 ”. Ini ikozvino ndave ex-mutengi we Amazon.com...
Jul 19, 2009 pa 11: 32 AM
Andrew, hauna kufunga here kuti chimwe chinhu chakabviswa pawakaona pasina mari kubva kuAmazon kwemwedzi mishoma?
Zvisinei, chimwe chikonzero nei vachifanira kufunga nezvekuvandudza sevhisi yavo ndechekuti parizvino havana yakavakirwa mu-sub-id yekutevera (kiyi yekutevera) mashandiro kune avo vedu vanoita PPC…
Jun 18, 2013 pa6: 37AM
Iwe wakagadzirisa sei chinongedzo? Ndiri kuva nedambudziko rakafanana ndichiedza kwariri chinongedzo pazwi rezwi.